တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံအုပ်ချုပ်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲရေး အကြံဉာဏ် တောင်းခံခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ | eTanitharyi
Home » Division Gov. News » တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံအုပ်ချုပ်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲရေး အကြံဉာဏ် တောင်းခံခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံအုပ်ချုပ်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲရေး အကြံဉာဏ် တောင်းခံခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
Tue, 08/27/2019 - 20:45
ထားဝယ် သြဂုတ် ၂၇
ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီအချိန်တွင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ထားဝယ်မြို့၊ မြို့တော်ခန်းမ၌ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာမူဝါဒ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံအုပ်ချုပ်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲရေးအကြံဉာဏ်တောင်းခံခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ အခမ်းအနားသို့ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် သယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဦးလှထွေး၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ၊ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများ ၊ ဖိတ်ကြားထားသူများ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် သယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီး ဦးလှထွေး က ယနေ့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေသော အကြောင်းအရာများဖြစ်သည့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ကဏ္ဍ ၊ မြေအသုံးချမှုနှင့်မြေနေရာသတ်မှတ်ခြင်း ဆိုင်ရာကဏ္ဍ ၊ အဏဝါနှင့်ကမ်းရိုးတန်းဂေဟစနစ်များကဏ္ဍ ၊ ရေ အရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ဝှမ်းဒေသများ သန့်ရှင်းကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်ရေးကဏ္ဍ ၊ လေအရည်အသွေးကဏ္ဍ ၊ စွမ်းအင်ကဏ္ဍ ၊ ရာသီဉတု ပြောင်းလဲမှုလျော့ပါးစေရေးနှင့်လိုက်လျောညီထွေနေထိုင်ရေးကဏ္ဍ ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲရေး ကဏ္ဍ ၊ အစားအစာဘေးကင်းစေရေးကဏ္ဍ ၊ ရေရှည်တည်တံ့သောထုတ်လုပ်မှုနှင့်စားသုံးမှုကဏ္ဍ ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် သဘာဝအမွေအနှစ်များကဏ္ဍ နှင့်သက်ဆိုင်သောကိစ္စရပ်များကို အဓိက ဆွေးနွေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်လာကြသော ပြည်သူလူထုများ၊ သက်ဆိုင်ရာ အကျိုးစီးပွားပါဝင်ပတ်သက်သူများနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများအနေဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆွေးနွေး၍ အကြံပြုချက်များနှင့်အကြံဉာဏ်များပေးစေလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ထားဝယ်ခရိုင်ခေတ္တအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဘုန်းလှိုင် က အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ရ ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး ထားဝယ်ခရိုင်ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးခိုင်ထွန်း က မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာမူဝါဒ နှင့် မဟာဗျူဟာများအကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍တက်ရောက်လာကြသူများ က ထားဝယ်ခရိုင်အတွင်းရှိ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရေးရာကိစ္စရပ်များအားအုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးကြပြီး ၄င်းတို့၏ဆွေးနွေးချက်များကို ပြန်လည်တင်ပြကြ ကာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာမူဝါဒပါ ခေါင်းစဉ်များနှင့်ကိုက်ညီသော ကိစ္စရပ်များကို အုပ်စုများ ခွဲ၍ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်းကို သြဂုတ် ၂၈ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
၂၄.၁၀.၂၀၂၀ ရက်နေ့ ခရိုင်များအလိုက် ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိသူများအား COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ကာကွယ်/ ကုသခြင်းများ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေ
၂၃.၁၀.၂၀၂၀ ရက်နေ့ ခရိုင်များအလိုက် ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိသူများအား COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ကာကွယ်/ ကုသခြင်းများ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေ
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိတ်ခရိုင်အတွင်း ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်
၂၂.၁၀.၂၀၂၀ ရက်နေ့ ခရိုင်များအလိုက် ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိသူများအား COVID-19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ ကာကွယ်/ ကုသခြင်းများ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေ
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး COVID – 19 ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများအား လက်ခံ၊ ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
© 2016 Tanintharyi Division Government. Powered by Information Matrix.